Fibebahana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fanenenana
Ny fibebahana (adika koa hoe "fibebahana") amin'Andriamanitra be famindram-po dia fiovan'ny toe-tsaina, entin'ny Fanahy Masina ary miorim-paka ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny fibebahana dia ahitana ny fahafantarana ny maha-mpanota ny tena sy ny fiarahana amin’ny fiainam-baovao, izay nohamasinina tamin’ny alalan’ny finoana an’i Jesoa Kristy. (Asan’ny Apostoly 2,38; Romana 2,4; 10,17; Romana 12,2)
Mianara mahatakatra fibebahana
Ny tahotra mahatsiravina ", ny famaritana dia ny tovolahy noho ny matahotra dia matahotra fa efa nandao azy noho ny fahotany miverimberina. "Nihevitra aho fa efa nibebaka izy, nefa nanao izany indray," hoy izy. "Tsy fantatro na dia fantatro raha tena mino aho, satria manahy aho fa Andriamanitra dia tsy hamela ahy intsony. Na manao ahoana na manao ny marina ny fibebahako dia toa tsy ampy velively izany. »
Andao hojerentsika ny tena dikan'ny filazantsara rehefa miresaka ny fibebahana amin'Andriamanitra.
Manao ny fahadisoana voalohany isika rehefa miezaka hahatakatra io teny io amin’ny fampiasana rakibolana ankapobeny ary mamadika ny teny hoe mibebaka (na mibebaka). Mety hahazo soso-kevitra mihitsy aza isika ao fa tokony ho takatra ny teny tsirairay araka ny fotoana namoahana ilay diksionera. Fa rakibolana ny faha-21. Century zara raha afaka manazava amintsika hoe inona ny mpanoratra izay z. B. nanoratra zavatra tamin’ny teny grika izay nolazaina teo aloha tamin’ny teny aramianina, ary azon’izy ireo 2000 taona lasa izay.
Webster Ny Fahasivy New Collegiate Dictionary dia mitarika ho amin'ny teny nenina ireto manaraka ireto: 1) miala ny tenanao amin'ny ota sy fanafody ny fanatsarana ny fiainana; 2a mihevitra) nenina na ny fanenenana; 2b) Ny fiovan'ny saina. Ny Encyclopaedia Brockhaus mamaritra ny fibebahana toy izao manaraka izao: "Ny manan-danja ny fiara fitateram-bahoaka ... asa dia ahitana ny lasa amin'ny fahotana taloha sy tapa-kevitra mafy tsy hanota intsony."
Ny famaritana voalohany ny Webster dia ahitana taratra izay tena hevitry ny ankamaroan'ny mpivavaka tamin'i Jesosy rehefa niteny izy hoe "mibebaha ary minoa". I Jesoa araka ny eritreritrao ihany no holazaina fa ireo olona ao amin'ny fanjakan 'Andriamanitra, ny mijanona tsy manota intsony, ary hanova ny lalany. Fa raha ny marina dia i Jesosy mihitsy no tsy niteny.
Fahadisoana amin'ny ankapobeny
Raha ny resaka fibebahana no atao, amin'ny ankapobeny, ny diso dia mihevitra ianao fa midika hoe mijanona ny ota. "Raha efa nibebaka marina tokoa, ianareo dia tsy nanao izany intsony," ny tsy tapaka ny hitsaharanao izay nampidi-doza tamin'ny fanahy ny ampahany amin'ny tsara fikasa, ny lalàna dia mahazo hihaino obligor mpanolotsaina ara-panahy. Nolazaina isika fa ny fibebahana dia ny "niverin-dalana sy handeha any amin'ny lalana hafa." Ary noho izany dia hazavaina ao anatin'izany fofonaina io ihany ny hoe miala amin'ny ota ary mitodika mankamin'ny fiainana mankato ny lalàn'Andriamanitra.
Amin'ny fahatsiarovana izany fahatsiarovana izany dia ny Kristiana amin'ny finiavana tsara indrindra dia natao hanova ny lalany. Ary toy izany koa amin'ny fivahiniany sasany dia toa miova ny sasany, fa ny hafa kosa toa miraikitra amin'ny lakaoly super. Ary na ny lalana nanova aza dia manana ny toetra tsy takatry ny fisehoana.
Andriamanitra dia afa-po amin'ny asa tsizarizary ny misavoritaka toy izany ny fankatoavana? "Tsia, tsy izany", hoy ny fampitandremana. Ary ny tsingerin'ny fahafoizan-tena, ny tsy fahombiazana ary ny famoizam-po izay manapotika ny filazantsara dia mankany amin'ny fihodinana manaraka, toy ny kodiarana amin'ny gadona hamono.
Ary raha sy rehefa misy kivy noho ny tsy fahombiazana ary ketraka, hitsena ny fitsipika 'Andriamanitra, no andrenesantsika hafa toriteny na mamaky vaovao lahatsoratra momba ny "tena nenina" sy ny hoe "lalina fanenenana" sy ny hoe toy izany ny fibebahana tanteraka fialana no vokatry ny fahotana.
Ary noho izany dia mitsambikina indray feno fanoloran-tena, satria te ho hampiala ny zavatra rehetra azo atao sy ny farany, fa miaraka amin'izay koa fadiranovana, mialoha vokatra. Noho izany ny fahasosorana sy ny famoizam-po dia mitohy satria nitombo fa fantatsika fa ny fialantsika amin'ny ota dia misy "tanteraka".
Ary dia tonga eo amin'ny famaranana fa tsy "tena nibebaka" manana ireo nenina izay tsy "ambany", fa tsy "mafy" na "marina" dia ampy. Ary raha tsy tena nitodika, dia tsy afaka manana ny tena finoana dia manana, izay midika fa manana ny Fanahy Masina tsy tena, izay kosa dia midika ho antsika fa isika dia tsy tena voavonjy.
Farany dia tonga eo amin'ny fotoana izay zatra miaina toy izany, na dia atsipy maro no efa nanao izany, tamin'ny farany ny lamba famaohana sy hiverina tanteraka amin'ny fitsaboana tsy mahomby fandaharana antsoin'ny olona hoe "Kristianisma".
Tsy lazaina akory ny voina izay tena inoan'ny olona fa nanadio ny fiainany izy ireo ary nahatonga azy ireo hankasitrahan'Andriamanitra - miharatsy kokoa ny toe-piainana. Ny fibebahana amin'Andriamanitra fotsiny dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiainany vaovao sy mihatsara.
Mibebaha ary minoa
“Mibebaha [mibebaha] ka minoa ny filazantsara!” hoy ny fanazavan’i Jesosy ao amin’ny Marka 1,15. Ny fibebahana sy ny finoana no manamarika ny fiandohan’ny fiainantsika vaovao ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra; tsy manao izany izy ireo satria nanao ny tsara izahay. Manamarika izany izy ireo satria amin’izay fotoana izay eo amin’ny fiainantsika dia latsaka avy amin’ny masontsika maizina ny mizana ary amin’ny farany dia hitantsika ao amin’i Jesosy ny fahazavana be voninahitry ny fahafahana an’ireo Zanak’Andriamanitra.
Ny zavatra rehetra tsy maintsy atao ho an'ny olona hahazoana famelan-keloka sy famonjena dia efa natao tamin'ny alàlan'ny fahafatesana sy fitsanganan'ny Zanak'Andriamanitra. Nisy fotoana izay nanafenana io fahamarinana io tamintsika. Noho izahay jamba dia tsy afaka nankafy taminy ary nandry tao aminy.
Nihevitra izahay fa tsy maintsy mitady ny lalantsika eto amin'ity tontolo ity, ary nampiasa ny herinay sy ny fotoana nanamboaranay fantsom-bolo teo amin'ny zoro kelinay andavan'andro izahay, araka izay azonay atao.
Ny saintsika rehetra teo amin'ny fijanonana velona ka tsy manana ahiahy ny hoavy. Niasa mafy izahay sarotra ny hodinihina sy hajaina. Izahay niady ho an'ny zony, miezaka ny ho tsy ara-drariny na inona na inona ny olona mamitaka sy. Tsy niady mba hiarovana ny laza sy ny fianakaviana sy ny Habakoka sy ny sisa voaro tsara. Nataonay avokoa ny sainay rehetra mba hanaovana zavatra tsy misy dikany amin'ny fiainantsika fa isika no mpandresy fa tsy ireo resy.
Raha ny olona rehetra niaina kosa dia ady very ity. Na eo aza ny ezaka ataontsika, ny drafitra ary ny asa mafy indrindra, tsy afaka mifehy ny fiainantsika isika. Tsy azontsika atao ny misakana ny loza sy ny loza, ary ny tsy fahombiazana sy ny fanaintainana miakatra antsika avy amin'ny lanitra manga ary manimba ny sisa tavela amin'ny nametraka ny fanantenana sy ny fifaliana.
Avy eo indray andro - tsy misy antony hafa ankoatra izay itiavany azy - avelan'Andriamanitra hahita ny tena zava-misy isika. An'izao tontolo izao ny antsika ary antsika isika.
Matin'ny ota isika, dia tsy misy fomba hafa. Very isika, very jamba amin'ny tontolo feno feno, very jamba satria tsy manana ny fahatsapana fa mitazona ny tanan'ny olona tokana izahay. Tsy maninona anefa izany, satria tamin'ny alàlan'ny hazofijaliana sy nitsanganany tamin'ny maty dia lasa mpandresy ho antsika izy; ary mety ho tonga mpandresy miaraka aminy isika amin'ny fampifangaroana aminy amin'ny fahafatesany ka afaka ny ho anisan'ny fitsanganany amin'ny maty koa isika.
Raha atao teny hafa, dia nanome vaovao tsara Andriamanitra! Ny vaovao tsara dia ny hoe nandoa vola be izy noho ny fitiavan-tena feno fitiavan-tena, manala baraka ary manimba. Nanavotra antsika tsy niheverana izy, nanasa antsika, hitafy fahamarinana, ary nanomana toerana eo amin'ny latabatra amin'ny fetiny mandrakizay. Ary noho ny tenin'ity tenin'ny filazantsara ity dia manasa antsika hino isika fa izany no izy.
Raha afaka mahafantatra izany noho ny fahasoavan 'Andriamanitra sy mino efa nibebaka. To manenina, hitanao, dia niantso hoe: "Eny! Eny! Eny! Mino aho izany! Matoky ny teninao aho! I handao ity fiainana ity ny nihazakazaka hamster amin'ny kodiarana aoriana Izaho, dia izao aimless tolona, ​​izao mahafaty, dia natao ho amin'ny fiainana Diso hevitra ilay vehivavy. Vonona aho ho amin'ny fitsaharanao, manampy ny tsy finoana! "
Manenina ny fanovana ny sainao. Manova ny fomba fijerinao ny fahitana ny tenanao ho ivon'izao rehetra izao ka izao no hahitanao an'Andriamanitra ho ivon'izao rehetra izao ary atokisanao ny fiainanao amin'ny famindram-pony. Izany dia midika hoe manaiky izany. Midika izany fa mametraka ny satroboninahitrao eo an-tongotr'ilay mpitondra mety amin'ny cosmos. Io no fanapahan-kevitra lehibe indrindra azonao raisina.
Tsy resaka fahaiza-miaina
Ao amin'ny fibebahana dia tsy momba ny fitondran-tena; tsy momba ny fitondran-tena tsara izany; dia tsy mikasika ny "manao tsaratsara kokoa" izany.
Ny fibebahana dia midika hoe fametrahanao ny fahatokisanao an'Andriamanitra fa tsy ny tenanao, na ny antony na ny namanao, ny firenenao, ny fanjakanao, ny basy, ny volanao, ny fahefanao, ny lazanao, ny lazanao, ny fiaranao, ny tranonao, Ny asanao, ny lova ankohonanao, ny volon-koditra, ny maha-lahy sy maha-vavy, ny fahombiazanao, ny endrikao, ny akanjonao, ny anaram-boninahinao, ny ambaratonga akademia, ny fiangonanao, ny vadinao, ny hozonao, ny mpitarika anao, ny IQ, ny accent, ny zava-bitanao, ny anao Ny asa soa, ny fanomezana, ny fanasoavanao, ny fangorahanao, ny famaizanao, ny fahadiovanao, ny fahamarinanao, ny fankatoavanao, ny fanoloran-tenanao, ny fifehezana ara-panahy na ny zavatra hafa azonao asehoana mifandraika aminao ary miala aho amin'ity fehezanteny lava ity manana.
Ny fibebahana dia midika hoe "Bet ny zava-drehetra eo amin'ny karatra iray" izany - ao amin'ny "karatra". Izany dia midika hoe ho any an-nikarapoka; izay lazainy fa hino; ny Ekipa-niakatra taminy ho any foana ny finoana aminy.
Ao amin'ny fibebahana dia tsy momba ny teny fikasana ny ho tsara. Tsy ny momba ny "fahotan'ny ny fiainany mba hanala." Izany dia midika hoe mino fa Andriamanitra-pamindra fony amintsika. Midika izany fa ny matoky an'Andriamanitra no manamboatra ny fontsika ratsy. ny dikan'ny hoe mino fa Andriamanitra no iza izy milaza ho - Mpamorona, Mpamonjy, Mpanavotra, Mpampianatra ô, Tompo sy Ender Masina. Ary midika hoe ho faty - ny ho faty tsy ho eo amin'ny eritreritsika manery antsika ho tsara sy tsara.
Ny fifankatiavana no resahintsika - tsy ny hoe tia an'Andriamanitra isika, fa ny nitiavany antsika (1. Johannes 4,10). Izy no loharanon'ny zava-drehetra, anisan'izany ianao, ary tonga saina ianao fa tia anao noho ny maha-zanak'i Kristy anao izy - azo antoka fa tsy noho ny zavatra anananao na ny nataonao na ny lazanao na inona. toa anao na inona na inona toetra anananao, fa noho ianao ao amin'i Kristy.
Tampoka teo dia tsy nisy toy ny teo aloha. Tonga mazava tampoka izao tontolo izao. Tsy zava-dehibe intsony ny tsy fahombiazanao rehetra. Nohamarinina ny zava-drehetra tamin’ny fahafatesan’i Kristy sy ny nitsanganany tamin’ny maty. Azo antoka ny ho avinao mandrakizay, ary tsy misy na inona na inona any an-danitra na ety an-tany mahaisotra ny fifalianareo, fa an’Andriamanitra ianareo noho ny amin’i Kristy (Romana 8,1.38-39). Mino azy ianao, matoky azy, mametraka ny ainao eo an-tanany; na inona na inona mitranga, na inona na inona lazain'ny olona na ataony.
Afaka ny ho malala-tanana ianao amin'ny famelan-keloka, ny fampiharana ny faharetana, ary ny hatsaram-panahy, na dia ao anatin'ny fahaverezana na ny tsy fahombiazana aza - tsy misy ho very ianao; fa efa nahazo ny zavatra rehetra tokoa ianareo ao amin’i Kristy (Efesiana 4,32-5,1-2). Ny hany zava-dehibe aminao dia ny zavaboariny vaovao (Galatiana 6,15).
Ny fibebahana dia tsy hoe fampanantenana rava sy poakaty fotsiny fa ho zazalahy na zazavavy tsara. Midika izany fa manamaivana ny sarinao lehibe rehetra momba ny tenanao ianao ary mametraka ny tananao malemy eo amin'ny tanan'ilay lehilahy izay namaha ny onjan-dranomasina (Galatianina). 6,3). Midika izany fa manatona an’i Kristy mba hiala sasatra (Mat 11,28-30). Midika hoe matoky ny teniny momba ny fahasoavany izany.
Ny fikasan'Andriamanitra fa tsy antsika
Ny fibebahana dia midika hoe matoky an'Andriamanitra, amin'ny maha-izy azy ary manao izay ataony. Ny fibebahana dia tsy mikasika ny asa soa ataonao noho ny asa ratsy ataonao. Andriamanitra izay maimaimpoana tanteraka, izy no tiany, dia nanapa-kevitra amin'ny fitiavany antsika hamela ny fahotantsika.
Aoka isika ho tonga saina tanteraka amin’izany: Andriamanitra dia mamela ny fahotantsika - ny taloha, ny ankehitriny ary ny ho avy; tsy namandrika azy ireo izy (Johanes 3,17). Maty ho antsika i Jesosy fony mbola mpanota isika (Romana 5,8). Izy no zanak'ondry hatao fanatitra, ary voavono ho antsika, ho antsika tsirairay avy (1. Johannes 2,2).
Ny fibebahana dia hitanao fa tsy fomba hahazoana an’Andriamanitra hanao izay efa nataony. Fa kosa, midika izany fa mino fa nanao izany izy - dia namonjy ny fiainanao ho mandrakizay ary nanome anao lova mandrakizay tsy misy vidiny - ary ny finoana fa mahatonga azy ho malaky anao ny fitiavana.
"Mamelà anay izay efa nanota ny helokay tahaka ny namelanay ireo," dia nampianatra antsika i Jesosy mba hivavaka. Raha tonga saina amintsika Andriamanitra, noho ny antony lehibe indrindra nataony, dia nanapa-kevitra ny hanala ny fiainantsika feno avonavona feno fitiavan-tena, ny lainga rehetra rehetra, ny lozisma rehetra, ny avonavontsika, ny faniriantsika, ny famadihana ary ny dikany - ny eritreritra ratsy rehetra, ny ataontsika ary ny drafitra - dia tsy maintsy manao fanapahan-kevitra. Afaka midera azy sy misaotra azy mandrakizay noho ny sorona ny fitiavana tsy hay lazaina, na afaka manohy miaina fotsiny ny teny filamatra: "Izaho tsara ny olona; tsy misy mihevitra fa tsy izaho »- ary manohy ny ain'ny haza mihazakazaka amin'ny kodiarana, izay tena mifamatotra antsika.
Afaka mino an 'Andriamanitra isika na tsy miraharaha azy na mihazakazaka aminy amin-tahotra. Raha mino azy isika, dia afaka mandeha miaraka aminy amin'ny finamanana feno fifaliana (izy no namana mpanota - ny mpanota rehetra, anisan'izany ny olona rehetra, na dia ny olona ratsy fanahy ary koa ny namantsika). Raha tsy matoky azy isika, raha mieritreritra isika fa tsy hamela antsika izy na tsia, dia tsy afaka miara-miaina aminy am-pifaliana isika (ary noho izany tsy miaraka amin'ny olon-kafa, afa-tsy ireo olona mitondra tena araka izay itiavantsika azy). Fa kosa hatahotra azy isika ary hanao tsinontsinona azy amin'ny farany (ary koa ny olona rehetra izay tsy manalavitra antsika).
Lafiny roa ilay vola madinika mitovy
Mifanaraka ny finoana sy ny fibebahana. Rehefa matoky an’Andriamanitra ianao dia mitranga ny roa zavatra miaraka aminy: mahatsapa ianao fa mpanota mila ny famindram-pon’Andriamanitra ary misafidy ny hatoky an’Andriamanitra ianao fa hamonjy anao sy hanavotra ny fiainanao. Amin'ny teny hafa, raha mametraka ny fitokisanao an'Andriamanitra ianao dia efa nibebaka ihany koa.
Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 2,38, oh. B. Hoy i Petera tamin’ny vahoaka tafavory: “Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina”. Koa ny finoana sy ny fibebahana dia ao anatin’ny fonosana iray. Rehefa nilaza izy hoe “mibebaha”, dia “finoana” na “fitokisana” koa no tiany holazaina.
Ao amin'ny tohin'ny tantara hafa dia hoy i Peter: "Mibebaha ary miverena amin'Andriamanitra ..." Ity fitodihana any amin'Andriamanitra ity dia miaraka amin'ny fialana amin'ny tena ihany. Tsy midika anao izao ankehitriny
madio ara-pitondrantena. Midika izany fa miala amin'ny fanirianao manokana ianao mba ho mendrika an'i Kristy ary mametraka ny fitokisanao sy ny fanantenana amin'ny teniny, ny vaovao mahafaly azy, amin'ny fanambarany fa ny rany dia ny famonjena anao, ny famelankeloka ary ny fitsangananao ary nisidina ny lova mandrakizay.
Raha matoky an'Andriamanitra ianao amin'ny famelan-keloka sy famonjena, dia efa nibebaka ianao. Ny fibebahana amin'Andriamanitra dia fiovana ao an-tsainao ary misy fiantraikany amin'ny fiainanao manontolo. Ny fomba fisainana vaovao dia fomba iray itokisana fa Andriamanitra dia hanao izay tsy azonao atao tao anatin'ny tapitrisa iray taona. Ny nenina dia tsy fanovana amin'ny tsy fahalavorariana ara-pitondrantena amin'ny fahatanterahana ara-moraly - tsy afaka manao izany ianao.
Tsy misy fandrosoana ny orinasa
Noho ny hoe maty ianao, dia tsy afaka ny ho tonga lafatra ara-pitondrantena. Ny fahotana dia namono anao tahaka ny nataon’i Paoly tao amin’ny Efesianina 2,4-5 nanambara. Fa na dia efa maty tamin'ny fahotanareo aza ianareo (ny hoe maty no anjaranareo tamin'ny dingan'ny famelan-keloka sy ny famonjena) dia novelomin'i Kristy ianareo (izay no nandraisan'i Kristy anjara: ny zavatra rehetra).
Ny hany zavatra azon'ny olona maty dia tsy afaka manao na inona na inona. Tsy afaka ny ho velona amin'ny fahamarinana na zavatra hafa izy ireo satria maty, maty amin'ny ota. Nefa ny olona maty - ary olona maty ihany - natsangana tamin'ny maty.
Ny fananganana ny maty no ataon'i Kristy. Tsy mampidina menaka manitra amin'ny faty izy. Tsy manohana azy ireo hametraka ny fombafomba fety ary hahalala raha hanao zavatra ara-drariny izy ireo. Maty ianao, tsy misy azonao atao. Jesosy dia tsy liana amin'ny vatana vaovao sy mihatsara. Ny nataon'i Jesosy dia mamoha azy ireo. Indray, ny faty dia hany olona tokana natsangany. Raha atao teny hafa dia ny fomba tokana hahazoana ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny fiainany dia ny maty. Tsy mila ezaka be dia be ny ho faty. Raha ny marina, tsy misy ezaka takiana. Ary ny maty dia tena misy antsika.
Tsy nahita ny tenany ilay ondry very raha tsy nikarakara azy ny Mpiandry ka nahita azy5,1-7). Ny farantsa very dia tsy nahita ny tenany raha tsy nitady ilay vehivavy ka nahita (and. 8-10). Ny hany zavatra nampian'izy ireo tamin'ny dingan'ny fitadiavana sy hita ary ny fety lehibe dia very. Ny fahaverezan'izy ireo tsy misy antenaina intsony no hany nahafahan'izy ireo hita.
Na ny zanaka adala ao amin'ny fanoharana manaraka aza (and 11-24) dia milaza fa efa voavela heloka sy voavotra ary nekena tanteraka izy, noho ny fahasoavan-drainy malala-tanana, tsy noho ny drafiny manokana, toa ny ohatra: "hiasa ho an'ny fahasoavany indray aho". Nangoraka azy ny rainy talohan'ny nandrenesany ny teny voalohany tamin'ny lahateniny "Miala tsiny indrindra aho" (and. 20).
Rehefa nanaiky ny toerany ho faty ny zanany lahy ary very tao an-davaky ny kisendrasendra, dia nandeha teny an-dalana hahita zava-mahagaga izay tena marina foana izy: ny rainy izay nolaviny ary iza no nanala baraka azy hatrizay. nitsahatra nitia azy tamim-pitiavana sy tsy misy fepetra.
Tsy niraharaha ny drafitra kely fanavotana ny rainy fotsiny ny rainy (and 19-24). Ary na dia tsy niandry fe-potoana fitsapana aza izy dia naveriny tamin'ny zon'ireo zanany feno. Ka ny fahafatesantsika tsy misy fanantenana tanteraka no hany mamela antsika hitsangana amin'ny maty. Ny fandraisana andraikitra, ny asa ary ny fahombiazan'ny asa rehetra dia miankina tanteraka amin'ny Mpiandry, ilay vehivavy, ny Ray - Andriamanitra.
Ny hany zavatra ataontsika amin'ny dingan'ny fitsanganantsika amin'ny maty dia ny ho faty. Mihatra amintsika ara-panahy sy ara-batana izany. Raha tsy azontsika ekena ny hoe maty isika, dia tsy azontsika ekena ny hoe natsangana tamin'ny maty isika, noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ny fibebahana dia midika hoe fanekena ny hoe maty ianao ary mahazo ny fitsangananao tamin'ny maty avy amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra.
Ny fibebahana dia hitanao, tsy midika hoe famoronana asa tsara sy mendri-kaja na manosika an'Andriamanitra hamela antsika amin'ny kabary ara-pihetseham-po vitsivitsy. Maty isika, izany hoe tsy misy na inona na inona azontsika atao mba handraisana na inona na inona amin'ny fialonantsika. Olana amin'ny finoana ny vaovao tsaran'Andriamanitra fa mamela heloka izy ary manavotra an'i Kristy ary amin'ny alalany koa manangana ny maty.
I Paoly dia manoritsoritra ity zava-miafina ity - na mifanohitra, raha sitrakao - ny amin'ny fahafatesantsika sy ny fitsanganantsika amin'ny maty ao amin'i Kristy, ao amin'ny Kolosiana. 3,3: « Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra.
Ny tsiambaratelo, na paradiso, dia hoe maty isika. Na eo aza izany dia mbola velona isika miaraka amin'izay. Fa ny fiainana, izay be voninahitra, dia tsy mbola ao: nafenina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, ary tsy hiseho satria tena misy izy mandra-pisehoan'i Kristy, araka ny andininy faha-4 hoe: «Raha Kristy, ny fiainanao , hanambara ny tenany, fa haseho miaraka aminy miaraka amin'ny voninahitra koa ianao. »
Kristy no fiainantsika. Rehefa miseho Izy, dia hiara-miseho aminy isika, satria izy no fiainantsika. Koa izao: ny vatan'ny maty tsy mahazo manao na inona na inona ho azy. Tsy afaka miova ianao. Tsy afaka "hanao tsaratsara kokoa ianao". Tsy afaka manatsara ianao. Ny hany azon'izy ireo atao dia ny maty.
Kanefa, ho an’Andriamanitra, Izay loharanon’aina, dia fifaliana lehibe ny manangana ny maty, ary ao amin’i Kristy no anaovany izany (Romana). 6,4). Tsy mitondra na inona na inona amin'ity dingana ity ny faty, afa-tsy ny fahafatesany.
Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra. Izy io ary avy aminy ihany, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Midika izany fa misy karazany roa mitsangana: dia faly mandray ny fanavotana azy ireo sy ireo izay maniry ny fahazaran'izy ireo ho velona, ​​izay manampina ny masony mba hiteny, manarona ny sofiny ary mijanona maty amin'ny heriny rehetra te.
Averina indray, ny fibebahana dia ny milaza ny eny amin'ny fanomezana ny famelan-keloka sy ny famonjena izay lazain'Andriamanitra fa ao amin'i Kristy. Tsy misy ifandraisany amin'ny fibebahana na fanaovana fampanantenana na hilentika amin'ny fanamelohana. Ie. Ny fibebahana dia tsy famerimberenana tsy tapaka "Miala tsiny" na "Mampanantena aho fa tsy hanao izany intsony". Tiantsika ny hanao ny marina. Ny mety hitranga dia hanao izany indray ianao - raha tsy tena mihetsika, farafaharatsiny ao amin'ny eritreritrao sy ny fanirianao ary ny fahatsapanao. Eny, miala tsiny ianao, angamba indraindray, ary tsy te ho olona tsara foana ianao, fa tsy izany no tena fanenenana.
Tadidinao fa maty ianao ary ny maty dia manao toy ny maty. Fa raha maty amin’ny ota ianareo, dia velona ao amin’i Kristy koa (Romana 6,11). Fa ny fiainanao ao amin'i Kristy dia miara-miafina aminy ao amin'Andriamanitra, ary tsy miseho amin'ny fotoana rehetra, na matetika - tsy mbola. Tsy manambara ny tena toetrany izany mandra-pahatongan'ny tenan'i Kristy.
Raha tsy izany dia raha mbola velona ao amin'i Kristy ianao izao, dia mbola maty amin'ny ota foana ankehitriny. Ary ny toetry ny fahafatesanao dia tsara hatrany hatrizay. Ary io tena maty io mihitsy, io olona io izay toa tsy sahy mijanona tsy manao tahaka ny olona maty, natsangan'i Kristy ary natsangana niaraka taminy ao amin'Andriamanitra - hambara rehefa miseho Izy.
Eo no miditra ny finoana. Mibebaha ary minoa ny filazantsara. Ny lafiny roa dia miaraka. Tsy afaka manana iray tsy misy ianao. Ny vaovao mahafaly amin'ny finoana fa nanasa anao tamin'ny ran'i Kristy Andriamanitra, dia nanasitrana ny fahafatesanao Izy ary nanangana anao hiaina ao amin'ny Zanany mandrakizay.
Ary ny fitodiana any amin'Andriamanitra amin'ny tsy afa-manoatra, ny fahaverezam-po sy ny fahafatesana ary ny fandraisana ny fanavotany maimaimpoana sy ny famonjena dia ny hananana finoana - mino ny filazantsara. Misolo tena ny lafiny roa amin'ny vola madinika iray ihany izy ireo; ary vola iray izay omen'Andriamanitra anao tsy misy antony hafa - tsy misy antony hafa afa-tsy izy sady tsara fanahy amintsika.
Fihetsika iray, fa tsy fandrefesana
Mazava ho azy fa hisy ny hilaza fa ny fibebahana amin'Andriamanitra dia haseho amin'ny fitondran-tena tsara sy ny fitondran-tena tsara. Tsy te hiady hevitra momba izany aho. Fa kosa, ny olana dia te handrefesana alahelo isika amin'ny tsy fisianana na fisian'ny fitondran-tena tsara; ary misy tsy fitovian-kevitra ratsy momba ny fibebahana.
Ny fahamarinana marina dia ny tsy hananantsika soatoavina sy fitondran-tena tonga lafatra; ary izay rehetra tsy ampy amin'ny fahatanterahana dia tsy tsara ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra ihany koa.
Te hanao zavatra tsy misy dikany izahay, toy ny hoe: "Raha mahatoky ny fibebahanao, dia tsy hanota intsony ianao." Izay indrindra no tsy mamaritra ny fibebahana.
Ny fanalahidin'ny fibebahana dia fo miova, lavitra ny tenanao, tsy miala amin'ny zoronao manokana, tsy maniry ho lasa lobbyist anao manokana, solontena mpanao gazety, solontena ao amin'ny sendika ary mpisolovava fiarovana, mankany amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra hijanona eo anilanao. ho eo amin'ny zoron-tranony, ho faty amin'ny maha-izy azy ary ho zanak'Andriamanitra malalany, izay voavela heloka ary navotany.
Ny fibebahana dia midika zavatra roa izay tsy tiantsika ara-dalàna. Voalohany, midika izany fa miatrika ny zava-misy fa ny tsipika fihirana, "Baby, tsy tsara ianao", dia mamaritra tsara antsika. Faharoa, midika hoe miatrika ny zava-misy fa tsy tsara noho ny olon-kafa isika. Isika rehetra dia mifanitsy amin'ireo resy rehetra noho ny famindram-po izay tsy mendrika antsika.
Raha atao teny hafa dia ny fibebahana dia misaina miaraka amin'ny saina manala baraka. Ny fanahy manambany dia olona tsy matoky izay azony atao; tsy nanana fanantenana navelany intsony izy, nanary ny fanahiny, ka raha izany dia maty, izy tenany ary nandry teo anaty harona teo anoloan 'ny vavahadin' Andriamanitra.
Lazao "eny!" amin'Andriamanitra "Eny!"
Tokony hanafoana ny fiheverana diso isika fa ny fibebahana dia fampanantenana fa tsy hanota intsony. Voalohany indrindra aloha, ny teny fikasana toy izany dia tsy misy afa-tsy ny rivotra mafana. Faharoa, tsy misy dikany ara-panahy izany.
Nanome anao "eny" mahery sy kotrokorana, ary mandrakizay Andriamanitra. nambara tamin'ny fahafatesana sy nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny fibebahana dia ny "eny!" Valiny amin'ny "eny!". Ny fiodinana amin'Andriamanitra mba hahazoana ny tso-dranony, ny fanambarany fotsiny ny maha-tsy manan-tsiny sy famonjena anao ao amin'i Kristy.
Ny fanekena ny fanomezam-pahasoavana dia midika fa manaiky ny toetranao momba ny fahafatesanao sy ny filanao fiainana mandrakizay ianao. Midika izany hoe matoky azy, mino azy ary mametraka ny fiainany manontolo, ny fiainanao, ny fisianao - ny zavatra rehetra misy anao - eo ampelatanany. Midika hoe miala sasatra ao izy io ary manolotra enta-mavesatra. Ka maninona no tsy mankafy sy miala sasatra amin'ny fahasoavana an'ny Tompontsika sy Mpanavotra antsika? Manavotra ny very izy. Izy no amonjeny ny mpanota. Mamoha ny maty izy.
Momba antsika Izy, ary satria misy Izy, tsy misy zavatra mahatohitra azy sy isika - tsia, na dia ny fahotanao ratsy na ny mpifanila trano aminao. Matokia azy. Vaovao tsara ho antsika rehetra izany. Izy no teniny ka fantany ny zavatra resahiny!